Aịzaya 23 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
23 Okwu e kwuru banyere Taya:+ Tienụ mkpu ákwá, unu ụgbọ mmiri Tashish!+ n’ihi na e bibiwo ya ka ọ ghara ịbụkwa ọdụ ụgbọ mmiri, ka ọ ghara ịbụkwa ebe a na-abanye abanye.+ N’ala Kitim+ ka a nọ kpugheere ha ya. 2 Derenụ duu, unu ndị bi n’ala dị n’ụsọ osimiri. Ndị ahịa si Saịdọn,+ bụ́ ndị na-agafe oké osimiri, ejuwo n’ime gị. 3 Mkpụrụ nke Shaịhọ,+ ihe ubi Naịl, bụ́ ihe ọ na-enweta, na-aga n’ọtụtụ mmiri; o wee ghọọ uru nke mba dị iche iche.+ 4 Ka ihere mee gị, Saịdọn;+ n’ihi na oké osimiri, gị ebe e wusiri ike nke oké osimiri, ekwuwo, sị: “Ime emetụbeghị m, amụtụbeghị m nwa, nke m ji azụlite ụmụ okorobịa, azuliteghịkwa m ụmụ agbọghọ.”+ 5 Dị nnọọ ka mgbe a nụrụ akụkọ banyere Ijipt,+ otú ahụ ka ndị mmadụ ga-anọ n’oké ihe mgbu mgbe ha ga-anụ akụkọ banyere Taya.+ 6 Gafetanụ na Tashish; tienụ mkpu ákwá, unu ndị bi n’ala dị n’ụsọ osimiri. 7 Ihe a ọ̀ bụ obodo unu nke nọ na-enwe aṅụrị kemgbe oge dị anya gara aga, kemgbe ọ dịwara? Ọ na-ejibu ụkwụ ya eje ebe dị anya ije biri dị ka ọbịa. 8 Ọ̀ bụ onye kpebiri ka e mee Taya ihe a,+ Taya nke na-ekpuwe ndị ọzọ okpueze, nke ndị ahịa ya bụ ndị isi, nke ndị ahịa ya bụ ndị a na-asọpụrụ n’ụwa?+ 9 Jehova nke ụsụụ ndị agha ekpebiwo ihe a,+ imerụ nganga nke ịma mma niile,+ ilelị ndị niile a na-asọpụrụ n’ụwa.+ 10 Too gabiga ala gị dị ka Osimiri Naịl, gị ada Tashish.+ E nwekwaghị ebe a na-arụ ụgbọ mmiri.+ 11 O setịwo aka ya n’elu oké osimiri. O mewo ka alaeze dị iche iche maa jijiji.+ Jehova enyewo iwu ka e mee Finishia ihe, ibibi ebe ya ndị e wusiri ike.+ 12 Ọ sịkwara: “Ị gakwaghị aṅụrị ọṅụ ọzọ,+ gị onye a na-emegbu emegbu, ada Saịdọn na-amaghị nwoke.+ Bilie gafee na Kitim.+ Ahụ́ agaghị ezu gị ike ọbụna n’ebe ahụ.” 13 Lee! Ala ndị Kaldia.+ Ọ bụ ndị a—ọ bụghị ndị Asiria+—mere ka ọ ghọọ ebe anụ ndị na-ebi n’ọzara ga-ebi.+ Ha ewuwo ụlọ elu nnọchibido ha.+ Ha ebukọrọwo ihe niile dị n’ụlọ elu ha;+ e mewo ka ọ bụrụ mkpọmkpọ ebe.+ 14 Tienụ mkpu ákwá, unu ụgbọ mmiri Tashish, n’ihi na e bibiwo ebe unu e wusiri ike.+ 15 Ọ ga-erukwa n’ụbọchị ahụ na a ga-echefu Taya ruo afọ iri asaa,+ dị ka oge ndụ nke otu eze si dị. Mgbe afọ iri asaa gasịrị, ihe ga-eme Taya ga-adị ka ihe a bụrụ n’abụ banyere nwaanyị akwụna, sị: 16 “Were ụbọ akwara gazuo obodo, gị nwaanyị akwụna e chefuru echefu.+ Were ike gị niile kpọọ ụbọ akwara; bụọ ọtụtụ abụ ka e wee cheta gị.” 17 Ọ ga-erukwa na mgbe afọ iri asaa gasịrị, Jehova ga-eche ihu n’ebe Taya nọ, ọ ga-amaliteghachi ịnata ego,+ na-agbakwa akwụna, ya na alaeze niile nke ụwa bụ́ ndị dị n’elu ala.+ 18 Uru ọ na-erite na ego a na-akwụ ya+ ga-aghọrọ Jehova ihe dị nsọ. A gaghị edebe ya edebe, a gaghịkwa akpakọba ya, n’ihi na ego a na-akwụ ya ga-adịrị ndị bi n’ihu Jehova,+ ka ha jiri ya na-eriju afọ, na-azụrụkwa uwe mara mma.+